Vaovao - Ny tsy fitovizan'ny jiro halogen, ny hid sy ny jiro
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny jiro halogen, Hid Sy Led
Misy karazana jiro lehibe telo lehibe. Ireto karazana jiro fiara ireto dia jiro halogen, Xenon & LED. Samy hafa tanteraka ny fomba fiasan'ny tsirairay amin'ny famokarany hazavana ary noho izany dia mamoaka karazana jiro isan-karazany eny an-dalana.
Jiro halogen no tena jiro ampiasaina matetika amin'ny ankamaroan'ny fiara. Ny noforonin'izy ireo dia nanomboka tamin'ny taona 1960 izay vahaolana ho an'ny famokarana hazavana miaraka amin'ny loharanom-bola voafetra. Tahaka ny jiro mirehitra ihany, ny halogens dia mampiasa filamentana tungsten nafanaina hamokarana hazavana. Ny filament kosa dia ampidirina amina bolongana halogène mirehitra tsy toy ny manazava, ho fepetra hanatsarana ny faharetana sy ny fahombiazana. Ireo jiro ireo dia mora amboarina ka mahatonga ny fizotry ny famokarana tsy lafo. Ankoatr'izay ny vidin'ny fanoloana dia ambany ihany koa. Ny jiro halogène dia afaka mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara misy modely samihafa satria samy hafa habe sy endrika izy ireo. Ireo jiro ireo dia tsy manome ny fahitana tsara indrindra satria ny takamoa sy ny LED HID fotsy. Hafanana be dia be no very rehefa mampiasa ireo jiro ireo ary avy eo angovo very maina. Ankoatr'izay, tena marefo izy ireo mitaky fikarakarana fanampiny tsy toy ny LED sy HID
HID (famoahana hafanam-po be)
Fantatra amin'ny famoahana hazavana mamirapiratra izay mahatratra lavitra tokoa izy ireo. Ny tungsten-dry zareo dia tafiditra ao anaty fantsona quartz feno gazy xenon. Mety mitaky herinaratra bebe kokoa izy ireo rehefa velomina saingy tsy mampiasa kely kokoa amin'izany mba hitazomana ny famirapiratany. Ankoatr'izay, manana androm-piainany lava kokoa izy ireo raha oharina amin'ny halogens. Mety ho tsara kokoa izy ireo saingy misy ihany koa ny fetrany toy ny lafo kokoa raha ny resaka famokarana sy ny fanoloana. Tsy mora ny manamboatra azy ireo amin'ny endriny sarotra. Ny hazavany mazava dia miteraka fiatraikany amin'ny fahatongavan'ireo fifamoivoizana izay tsy ilaina ary mety hiteraka loza amin'ny arabe.
LED (Diode Emitting Light)
Ireo izao no fanavaozana farany sy farany izay mandray ny HID sy Halogens. Ny LED dia mampiasa ny teknolojia diode izay mamokatra hazavana rehefa mampientanentana ny elektronany ny herinaratra. Mila hery ambany sy angovo ambany izy ireo ary mbola mamokatra hazavana mamiratra kokoa noho ny jiro halogen izay mitarika amin'ny androm-piainan'ny LED lava kokoa ihany koa. Ny diode azon'izy ireo dia azo ovaina amin'ny endrika samihafa manome configurations tsy manam-paharoa. Miaraka amin'ny teknolojia LED, nihatsara kokoa ny fahitana ary nifantoka bebe kokoa. Na dia ambany noho ny LED aza ny vidin'ny takelaka HID sy ny halogen voalohany dia ambany kokoa ny vidin'ny LED sy ny fikojakojana ny LED. Ny LED, manana fiainana lava kokoa, dia mampihena ny fikojakojana sy ny vidin'ny fanoloana jiro. Satria ny LED dia mila soloina matetika kokoa, ny tompony dia mandany kely amin'ny jiro vaovao sy ny asa ilaina hanovana azy ireo. Ny LED ihany koa dia mandany angovo kely kokoa; noho izany ny vidin'ny rafitra LED dia mety ho ambany kokoa noho ny an'ny rafitra fanazavana mahazatra.
Fehezo ny bushing arm, Auto Accessory, Clamping Element, Piesy detase, Fizarana famehezana, Tombo-kase vita amin'ny landy,